gPodder: Isku-duwaha warbaahinta fudud iyo macmiilka Podcast ee Linux | Laga soo bilaabo Linux
Tan iyo, maalmahan waa mid aad moodada in la isticmaalo Podcasts, ma aha oo kaliya duurka ee faafinta, barashada iyo barida ka soo duurka Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / Linux, laakiin dhammaan noocyada baaxadda, nuxurka iyo ujeeddada, maanta waxaan ka hadli doonnaa «gPodder ».
«gPodder » waa qalab yar, laakiin aad u faa iido badan oo softiweer ah oo lagu sameeyay Python leh GTK +, kaas oo u shaqeeya sida fudud isku darka warbaahinta iyo macmiilka Podcast loogu talagalay Linux, taasi waa, way noo oggolaaneysaa soo dejiso oo dhageyso kanaallo badan oo Podcast ah hab fudud oo dhakhso leh.
Intaanan bilaabin inaan sharaxo «gPodder »Sida caadiga ah, waxaan kugula talineynaa markaad aqriso daabicadan, booqo daabiciddeenii hore oo laxiriira mowduuca codsiyada waxtarka leh si aad udhageysato Podcast-ka Linux, oo ku saabsan Goodvibes», oo aan ku sifeyno waqtigiisa sida soo socota:
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo uu ahaa codsi dhageysi Idaacadaha internetkaleh a khiyaano yar lagu sharaxay boostada la dhaho, waxaan ku dhageysan karnaa khadka tooska ah ee kanaalada podcast.
1 gPodder: Isku-duwaha warbaahinta iyo macmiilka Podcast
1.1 Macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan gPodder
1.2 Maxaa ku cusub nooca 3.10.17
1.3 Rakibaadda iyo Screenshots
gPodder: Isku-duwaha warbaahinta iyo macmiilka Podcast
Macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan gPodder
Sidaad sheegtay degel rasmi ahxilligan «gPodder » isagaa iska leh nooca 3.10.17. Tan iyo noocyadeedii hore waa la baadhi karaa adiga oo gujinaya waxyaabaha soo socda isku xirka. Guud ahaan marka laga hadlayo, waa a Macmiilka Linux-ka taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan maamulno (soo dejino oo dhageysano) waxyaabaha aan jecel nahay kanaalada iyada oo loo marayo interface fudud, laakiin sifooyin buuxa, sida ku darista / tafatirka / tirtirka / raadinta iyo / ama soo dejinta / dhoofinta podcast. Waxay sidoo kale leedahay is-dhexgal heer sare ah oo ku saabsan websaydhada «Soundcloud (soundcloud.com)» y «GPodder (gpodder.net)».
Maxaa ku cusub nooca 3.10.17
Waxaa ka mid ah astaamaha cusub (hagaajinta iyo hagaajinta) ee lagu soo daray sii deyntaan ugu dambeysay, waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Dib-u-dejinta shaqada YouTube-DL.
Sixitaanka khaladaadka cusboonaysiinta ilaha isu geeyayaasha (quudinta), oo hadda kaliya soo saaraya hal ogeysiin. Taas oo lagu arki karo astaanta digniinta ee ku xigta cinwaankooda.
Cusbooneysiinta taageerada luuqadaha kala duwan ee Shiinaha, Ruushka, Bortuqiiska Burtaqiiska, Jarmalka, iyo kuwa kale. Iskuxirkiisa gabi ahaanba looma turjumin luuqada Isbaanishka, laakiin si ballaaran.
Loo heli karo Linux, MacOS, iyo Windows.
Rakibaadda iyo Screenshots
Xaaladdayda shakhsiyeed, waxaan ku rakibay gPodder anigoo isticmaalaya hub fidsan, aniga igu saabsan MX Linux Respin Shakhsiyeed (MilagrOS), taas oo aad kaliya u baahan tahay inaad ku fuliso amarka soo socda:
Si markaa loo ordo loona isticmaalo adoo adeegsanaya Liiska Codsiyada. Waxay umuuqataa sida ka muuqata sawirada hoose:
Nota: Shaqsi ahaan, ka «gPodder » Runtii waan ka helay awooda kudar cinwaanka YouTube Channel iyo inaad awood u yeelan karto inaad kala soo baxdo iyaga oo aan dhibaato lahayn. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud u helno URL-ka quudintooda, si loogu daro, tusaale ahaan, quudinta websaydhka. Aniguna maan jeclayn, midka aan keenayn faylasha rakibayaasha «.deb, .rpm o .AppImage», inkasta oo ay xoogaa kaabayaan helitaanka LaunchPad. Beddel ka sii horumarsan ayaa noqon kara Podgrab.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «gPodder», taas oo ah aalad yar, laakiin aad u faa'iido badan oo softiweer ah oo lagu soo saaray Python oo leh GTK +, oo u shaqeysa sidii fudud isku darka warbaahinta iyo macmiilka Podcast loogu talagalay Linux; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » gPodder: Isku-duwaha warbaahinta fudud iyo macmiilka Podcast ee Linux
Raspberry Pi Foundation waxay si qarsoodi ah u rakibtay bakhaar Microsoft ah
Kobalos, oo ah khayaano xadaya aqoonsiyada SSH ee Linux, BSD iyo Solaris